Mootummaan Ameerikaa ajjeechaan Oromoo irra gayaa jiru yaachisaadha jedha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mootummaan Ameerikaa ajjeechaan Oromoo irra gayaa jiru yaachisaadha jedha
Mootummaan Ameerikaa ajjeechaan Oromoo irra gayaa jiru yaachisaadha jedha
Waajjirri Ministera Haajaa Biyya-alaa Ameerikaa ajjeechaan Itoophiyaa keessatti Oromoo irratti raawwataa jiru kan isa yaachise ta’uu ibse. ‘Ajjeechaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hedduu yaachisaadha,’ jedhe ibsi waajjira ministerichaa irraa baye. Namoonni hiriira mormii irratti ajjeefamanis heddu ta’uu agariise ibsi baye kuni.
Lubbuun namootaa galaafatamuutti kan gadde mootummaan Ameerikaa, maatii ijjoolleen irraa dhumaniifis gadda qabu dabarseera.
‘Mootummaan Ioophiyaa ummanni hiriira nagaa akka geggeeffatuuf hayyamuu qaba,’ jedhe. Mootummaan Itoophiyaa aarii fi yaaddoo haqaa ummanni qabatee bayeefis karaa mariifi nagaan furuu akka qabus hubachiiseera.
Mootummaan Itoophiyaa kanniin dhimmi ilaallatu hunda qajeelatti osoo hin mari’achiisne maater pilaanii Finfinnee hujii irra oolchuun adeemsa sirrii akka hin taane jala sarareera, mootummaan Ameerikaa ibsa baase keessatti.
Itti dabaluudhaanis, gaafii fi sochii ka’e ukkamsuuf mootummaan Itoophiyaa humnatti fayyadamuu irraa akka ufqusatus waamicha dhiheessaniiru. ‘Haasofni MM Haylamaaraam Dassaalenyi godhe humnoonni tikaa humnatti fayadamuuun dhiiga dhangalaasuu irratti akka bobba’uuf eebbisanii qajeelchuudha,’ jechuudhaan qeeqxe Samaantaa Paawar.
SOURCEUS State Department
ibsa mootummaa ameerikaa
Previous articleHiriira mormii irratti Oromoon 40 ajjeefamuu Amnesty International mirkaneesse
Next articleOromoo 75’tu mootummaa Itoophiyaan ajjeefame, jedha HRW